Zvizvarwa ZveZimbabwe Zviri muSouth Africa Zvotemeswa Musoro neNyaya yeMapepa eKushanda.
Kurume 24, 2014
n Council building in Brussels, Tuesday, Sept. 28, 2010. (AP Photo/Yves Logghe)
WASHINGTON — Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neMvhuro zvakumbira vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe munyika iyi, VaGodfrey Magwenzi, kuti vataure nehurumende yeSouth Africa neyeZimbabwe kuti havasi kufara nenyaya yemapepa avo ekushanda munyika iyi anonzi ave kusvika kwamvura yacheka.
Zviri kunziwo vanoda mapepa matsva vatange vadzokera kuZimbabwe .
Mashoko aya akataurwa kuvatori venhau nevakafanobata chigaro chemutauriri wedare remakurukota emu South Africa, Amai Phumla Williams, avo vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvakapihwa mapepa ekushanda muSouth Africa muna 2009 pasi pechirongwa che “Dispensation for Zimbabwe Projects” zvinofanira kudzokera kuZimbabwe.
Amai Williams vakati gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati meSouth Africa, Amai Naledi Pandor, vachataura zvizere nezvedanho iri mumazuva mashoma anotevera.
Danho reSouth Africa iri rakonzera kugeda geda kwemeno kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi.
VaMangwenzi vanoti havasati vawana magwaro ezvinyunyuto zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Panofungidzirwa kuti pane zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinosvika zviuru mazana matatu zvakambopihwa mapepa ekushanda muSouth Africa.
Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe riri muSouth Africa rinonzi Migrant Workers Association of South Africa rinoti richaenda kumatare kuti hurumende yeSouth Africa ijekese kuti ichaita sei nevanhu vanenge vasisina mapapepa.
Sangano iri rinotiwo rine humbowo hwekuti vanenge vadzokera kuZimbabwe havazotenderwe kudzoka zvakare muSouth Africa.
Asi mutauriri rimwe resangano rezvizvarwa zveZimbabwe, re Zimbabwe Migrants Association, VaDaniel Muzenda, vanotiwo vachayedza kutaurirana nehurumende dzeZimbabwe neSouth Africa kuitira kuti dambudziko iri rigadziriswe.
Mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, ndivo vaive mutongi gava weSADC panyaya yeZimbabwe pakaitwa chirongwa chekupa vanhu vemuZimbabwe hugari mu South Africa..
Hurukuro naVaDaniel Muzenda